Iphulo elichasene no-Erdogan >> Inkxaso yePixelHELPER
[gallery_bank type = "imifanekiso" format "" masonry "title =" true "desc =" false "responding =" true "display =" selected "no_of_images =" 40 ″ sort_by = "random" animation_effect = "bounce" album_title = " eyinyani "i-albhamu_id =" 11 ″]
Emva kofakelo oluninzi lwezopolitiko oluboniswe kwizakhiwo zozakuzo eTurkey naseSaudi Arabia, amagcisa akhanyayo avela ePixelHELPER aphinde abetha ngoLwesine ebusuku. Babeqhankqalaza ngokuchasene nesicwangciso sikaMongameli Erdogan sokuphakamisa ukungakhuseleki kumapalamente.
U-Oliver Bienkowski wasePixelHELPER uxoxe ngemisebenzi yeqela ngodliwano-ndlebe.
Umnumzana Bienkowski, ngolwesine ebusuku uphinde waqikelela ukufakwa kokukhanya kwindlu yozakuzo yaseTurkey. Kumboniso kwakukho umfanekiso kaMongameli waseTurkey u-Erdogan njengo-Queen Mum, ukhozi lobukhosi kunye nesignesha ye-AKP kunye nesihloko se-pseudo esivela kwi-"Völkischer Beobachter" efundeka ngolu hlobo: I-Reichstag inikezela amandla ku-Erdogan. Yintoni kanye kanye obufuna ukuyiveza okanye ukuyigxeka ngolu qikelelo?
"Sifake iminwe yethu enxebeni" Sasifuna ukubonisa iingxaki eTurkey ezibangelwa ukuphakanyiswa kwe-immunity phantse onke amalungu epalamente. U-Erdogan okwangoku uzama ukuguqula ilizwe libe nguzwilakhe kamongameli - ngokuqinisekileyo oku kucinga ukuba iingqondo kunye nabaculi baseTurkey bacinga. Besifuna nje ukuthatha inyathelo lokuqala, ngakumbi malunga nohambo lweNgqonyela lokuya eTurkey. Sasifuna nje ukunika uNksz Merkel ipere ye-caricatures yobugcisa obukhanyayo kwaye sigxeke indima ka-Erdogan. Yingakho sikhanyisa u-Erdogan kwi-ambassy yaseTurkey ngamagama athi "uThixo usindise uKumkanikazi" - intloko yayiyi-Queen kunye nobuso buka-Erdogan kuphela. Ezinye iimotifs zizichaza ngokwazo. Endaweni ye-swastika, ukhozi lwasebukhosini lwalunophawu lwe-AKP kaMnu Erdogan kuyo. Kwaye esi sihloko esivela kwi "Völkischer Beobachter" sithetha nje ukuba u-Erdogan uyazixhobisa ngokungakwazi ngokupheleleyo kwamaLungu ePalamente kwaye ngaloo ndlela mhlawumbi udlula kule nkqubo yomongameli ayifunayo kakhulu.
Leyo yayingeyokuqala uthelekiso olwenzileyo phakathi kuka-Erdogan noHitler, kwaye kwixesha elidlulileyo kukho amazwi agxekayo. Ngaba uyafuna ukuqhubeka nolu thelekiso ukuze uvuse abantu?
Ndicinga ukuba bonke abantu abazalelwe eJamani banembopheleleko yembali yokulwa nokuthintela oozwilakhe abanjalo kunye neendlela zobuzwilakhe ezisetyenziswa eTurkey. Ndicinga ukuba ukuba ubona i-1933 kunye noMthetho Wokuvulela kwaye ubone indlela u-Erdogan ejongene ngayo neendaba, abaculi kunye nabachasayo, ngoko wonke umntu uyakubona ukufana. Nabani na ozama ukukhanyela oku kufuneka avule amehlo ngokwenene kwaye afunde kulo mbandela, kuba yiloo nto eyenzekayo ngoku.
Ngokufutshane malunga nenkqubo phezolo: Ingaba bekukho ingxaki okanye uye wathintelwa nangayiphi na indlela ngexesha lesenzo?
Kubusuku bokugqibela bekufana nefilimu ethi "Ocean's Eleven". Saya apho kunye nabantu abathathu kwaye inenekazi elihle lihlala liphazamisa amapolisa ngelo xesha xa sasikhanyisa le caricature yobugcisa obukhanyayo kwisakhiwo imizuzwana emihlanu ukuya kwelishumi. Emva koko sahlala sithatha iifoto. Ngeli xesha siye saya kwindlu yozakuzo sisuka ngaphambili hayi ngasemva, apho kukho udonga olukhulu. Ngesi sihlandlo sicinge ukuba kufuneka siyibeke kwindawo esembindini. Nathi siyiphethe loo nto kwaye amapolisa akazange aqaphele. Ilungile loo nto, kuba ibasindise emsebenzini kunye nathi, ukuze sikwazi ukuyibiza kusuku olungaphambili. Ezi foto ngoku zikwakwi-intanethi. Baye benza ntoni ukuza kuthi ga ngoku? Iifoto zabelwana ngenkuthalo kulo lonke elaseYurophu nakwihlabathi liphela, kanye njengoko sifuna ukuba zibe njalo. Sifuna ukucacisa kwaye sibonise iingxaki. Sicinga ukuba u-Erdogan sele ewufumene lo myalezo. Ndigcina iminwe yam inqamleze wonke umntu ukuba le voti ayihambi kakuhle ngolwesiHlanu kwaye wonke umntu unokugcina ukungagungqi kwabo.
Iividiyo zephulo kunye nembonakalo yeTV | DeutscheWelle |